ANT Radio Service 4.15.00 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.15.00 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား စာၾကည့္တိုက္မ်ား & အစမ္း ANT Radio Service
ANT Radio Service ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကိုဒီဝန်ဆောင်မှုကိုသင့်ဖုန်းတွင်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု၏အခြားပုံစံများကို enable သော system component များကို (ဆိုလိုသည်မှာ။ Wi-Fi, NFC ကို) တူညီသည်နှင့်သင်ပုရွက်ဆိတ်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်တယ်အနေနဲ့ app ကိုစတင်မဟုတ်လျှင် system ကိုသယံဇာတများကို run သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုမည်မဟုတ်။ ဒါဟာ built-in ပုရွက်ဆိတ်ကြိုးမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲပြီးသားလုပ်ကိုင်သင့်မိုဘိုင်း device ကိုအတွက်လက်ဆောင်ကိုခွင့်ပြုမှသင့်ရဲ့ device ထုတ်လုပ်သူများက pre-install ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ဤ feature ကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်မထားဘူးဆိုရင်ရှိသင့် system ကိုမသက်ရောက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်မျှထပ်မံအရေးယူလိုအပ်ပါသည်။
ကိုဤဝန်ဆောင်မှုကိုသင့်ဖုန်းတွင် pre-installed မပါရှိပါကသင်နေတုန်းပဲနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ http://www.thisisant.com/developer/ant/ant-in-android/ မြင်ရ, ပုရွက်ဆိတ် + ဆက်သွယ်ရေး enable နိုင်။ < / i>
ပုရွက်ဆိတ်အနေနဲ့အလွန်အမင်းအာဏာထိရောက်စွာကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ပုရွက်ဆိတ်မှဆက်သွယ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအခြားပုရွက်ဆိတ်သို့မဟုတ်ပုရွက်ဆိတ် + devices များအသုံးပြုမှုကိုလုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီနေ့, ဒီ service ကိုသင်လူကြိုက်များ interoperable ပုရွက်ဆိတ် + ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာများ, ကြံ့ခိုင်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, စက်ဘီးစီးခြင်းထုတ်ကုန်များ, အလေးချိန်ချိန်ခွင်နှင့်ပိုပြီးအဖြစ်အားကစား / ကြံ့ခိုင်မှု / ကျန်းမာရေး devices တွေကိုချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အနာဂတျမှာကထိုကဲ့သို့သောအလင်းရောင်, အပူချိန်နှင့်တံခါးကိုသော့ခတ် functions တွေ၏အိမျအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်သင့်မိုဘိုင်း device မှအသစ် applications များ, တစ်အမြောက်အမြားကိုဖွင့်ပုရွက်ဆိတ်ကိုအသုံးပွုဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို www.thisisant.com သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဤစနစ်ကိုဝန်ဆောင်မှုကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်တင်မရနိုင်ပါ။ ပုရွက်ဆိတ်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်တယ်ဆိုပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသည်အခါတိုင်းကျွန်တော်နောက်ခံအလိုအလျှောက် run ပါလိမ့်မယ်။
ပုရွက်ဆိတ် + ကို enable လုပ်ထားပလီကေးရှင်းစပုံမှန်အားဖြင့်ပုရွက်ဆိတ် + Plugins တွေကို http://play.google.com/store/apps/details?id=com.dsi.ant.plugins.antplus ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လိုအပ်သည်
ပုရွက်ဆိတ် + နှင့်အတူတိုးမြှင့်အချို့ကလူကြိုက်များတဲ့ App များ:
* က Samsung S ကကနျြးမာရေး
STL အားဖြင့် * SportsTracker
* ကြှနျုပျ၏ Track
* Run.GPS သင်တန်းပေးသူခရမ်းလွန်
* MapMyFITNESS / စီးနငျးတိုကျခိုကျ / RUN / Walk + / တောင်တက် / DOGWALK
ပုရွက်ဆိတ် Applications ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ:
ပုရွက်ဆိတ် devices များကိုချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အချက်အလက်လွှဲပြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုရွက်ဆိတ် API ကိုသုံးပြီးရိုးရှင်းစတာတွေထိုကဲ့သို့သောအာရုံခံကိရိယာများ, မော်နီတာ, ကွန်, command and control အဖြစ်နိမ့်ဒေတာနှုန်းကပလီကေးရှင်းသည်အလွန်ကြီးတစ်ဦးက ultra နိမ့်အာဏာကြိုးမဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ပုရွက်ဆိတ် + ထုတ်ကုန်များအတွက် apps တွေဖွံ့ဖြိုးဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုရွက်ဆိတ် + Plugins တွေကို API ကိုသုံးပြီးပင်လွယ်ကူသည်။ ဤရွေ့ကား API များအသုံးပြုရန်အခမဲ့ဖြစ်ကြ၏။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ http://www.thisisant.com/developer/ant/ant-in-android/ မှာရရှိနိုင်ပါသည်။
လိုအပ်ပါသည် Android အတွက်ခွင့်ပြုချက်:
ကိုအပြည့်အဝကွန်ယက် Access: ပုရွက်ဆိတ်ရေဒီယိုဝန်ဆောင်မှုအင်တာနက်ကိုကျော်မဆို data တွေကို download လုပ်သို့မဟုတ် upload ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ထိုသို့ပုရွက်ဆိတ် သုံး. အိမ်ရှင်က Windows PC ပေါ်မှာတစ်ပုရွက်ဆိတ်ကို USB Stick နဲ့ဆက်သွယ်မှအင်တာနက်ခြေစွပ်ဖို့ access ကိုလိုအပ်တယ်မည်သည့်ကိစ္စရပ်အတွက်: (ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုလိုသည်မှာ) ကတစ်ဦးကို Android emulator ပေါ်မှာပုရွက်ဆိတ်ရေဒီယိုဝန်ဆောင်မှုကို install လုပ်လို့ရပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤသည်ခွင့်ပြုချက်သာလိုအပ်သည် Android အတွက် emulator Tools များ။ ဤသည်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အင်တာနက်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်ရှိသောဒေသခံ PC နဲ့ဆက်သွယ်။
Modify System Settings: ဒါကခွင့်ပြုရှိမရှိပုရွက်ဆိတ်ကနဦးပိတ်ထားသို့မဟုတ်လေယာဉ်ပျံ mode ကိုဝသို့ဝင်သောအခါပေါ်သိုထားသင့်ပါတယ်။
Bluetooth ကိုအက်ဒ်မင်: တချို့ဟာ့ဒ်ဝဲ configurations ပုရွက်ဆိတ်တွင် system ကိုအဆင့်မှာ Bluetooth ကိုနှင့်ဆက်သွယ်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဤ service ကို bluetooth က Scan ဖတ်စက်ကိုစတင်သို့မဟုတ် bluetooth ကဆက်သွယ်မှုများကိုဖန်တီးမည်မဟုတ်။
* ယေဘုယျပုရွက်ဆိတ်နှင့်ပုရွက်ဆိတ် + http://www.thisisant.com
* Android ပေါ်တွင်ပုရွက်ဆိတ် http://www.thisisant.com/consumer/ant-101/ant-in-phones/
* ပုရွက်ဆိတ် + လက်မှတ်ရ Apps http://www.thisisant.com/directory/filter/~/115/~/
* အခြားပုရွက်ဆိတ် + လက်မှတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ http://www.thisisant.com/directory/
ဒါကြောင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၌ကျန်ကြွင်းအားလုံးမေးခွန်းများကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်ခက်ခဲသည်အဖြစ် ကို android@thisisant.com မှမည်သည့်မေးခွန်းများကိုစေလွှတ်မည်ပါ။
ANT Radio Service အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ANT Radio Service အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ANT Radio Service အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ANT Radio Service အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 53.98k 16.9M
ANT Radio Service ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း ANT Radio Service အခ်က္အလက္
Release date: 2019-09-11 05:45:11
ANT Radio Service APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ